Siyakukhumbuza ukuba ungalitshintsha njani igama leMac yakho ngendlela elula | Ndisuka mac
Siqinisekile ukuba uninzi lwabo bakhoyo sele besazi kakuhle ukuba liza kutshintshwa njani eli gama kwi-Mac yakho, kodwa ngokuqinisekileyo abaninzi abasakhumbuli. Ungayibona loo nto in Ndivela eMac esele sithethile ngayo kwizihlandlo ezidlulileyo, kodwa kuhlala kulungile ukuvuselela inkumbulo yakho kunye nabasebenzisi abatsha ukufumana ezi ntlobo zezifundo zilula kwaye ngaphezulu kwako konke okusebenzayo.
Uninzi lwethu, ukuthenga iMac yindleko ebalulekileyo kwaye yiyo loo nto xa sinayo ekhaya into yokuqala esifuna ukuyenza kukuyonwabela ngokupheleleyo. Ngamaxesha amaninzi asihoyi kuqwalaselo lokuqala kwaye yiyo loo nto ukuba kamva sifuna ukutshintsha igama lezixhobo okanye silungiselele ezinye izinto, Kufuneka sibuyele kuKhetho lweNkqubo.
Indawo ekhethiweyo kwiNkqubo
Ewe, masihle siye kwishishini. Into ekufuneka siyenzile ukuvula ifayile ye- Ukukhethwa kweNkqubo kunye nokufikelela kwifolda yokwabelana. Ewe kubonakala ngathi ayizukuba yeyona menyu ifanelekileyo yokutshintsha igama leqela lethu (elinokuthi lihambe ngokubanzi) kodwa ibikhona iminyaka emininzi.
Kule menyu efanayo kulapho siza kubona igama leqela lethu, kwimeko yam iMac yeJordi kwaye kufuneka sibhale phi igama elitsha. Ilula, kulula kwaye iyakhawuleza, ingxaki ihlala inxulumana nendawo yolu khetho ekunzima ukuyifumana ekuqaleni. Ngesi sizathu, sicebisa bonke abasebenzisi abasandula ukuthenga iMac okanye abaceba ukwenza njalo kwixa elizayo, ukuhamba ngeendlela ezikhethwayo zeNkqubo ngale ndlela ufumanisa iinkcukacha ezinje ngoku ukuze ukwazi ukutshintsha igama leqela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Siyakukhumbuza ukuba ungalitshintsha njani igama leMac yakho ngendlela elula